I-Ultrasonic Agrochemicals Ukukhiqiza - Hielscher Ultrasound Technology
Ukwakhiwa kwama-agrochemicals kuhlanganisa ukusabalalisa, ukuchithwa, ukukhipha emulsification, kanye nokwenziwa kwe-homogenization yamakhemikhali. I-Ultrasound iyinqubo yokuxuba enokwethenjelwa yokumiswa kwamakhemikhali okusezingeni eliphezulu.
Ukuhlakazeka kwe-ultrasonic nokuqedwa kuvumela ukukhiqiza ukukhishwa okukhulu kwemithwalo ngesivinini esiphakeme sokusabalalisa.
Ukwakhiwa kwe-ultrasonic kwenza ukwazi ukulungisa nokuguqula izithako ezisebenzayo njengezinhlayiya ze-nano nama-polymers.
Ukukhiqizwa kwe-Ultrasonic yezolimo zezolimo
Inqubo yokukhiqiza ama-agrochemicals – ezifana namanyolo (isib. i-nitrogen- ne-phosphorus-based-based) kanye nezibulala-zinambuzane zokuvikelwa kwezitshalo (isib. uketshezi, izinambuzane, ama-fungicides, i-rodenticides) kanye nezinye izinto ze-agrochemical izinto ezisebenzayo – kudinga ukukhokha okunokwethenjelwa, ukusabalalisa, ukuchithwa, kanye nokukhipha emithini yezithako zomkhiqizo wokugcina. Amandla-ultrasound inikeza okuthembekile Ukuxuba, i-homogenization futhi ihlanganiswe ngu cavitation-izikhukhula ezinamandla eziphezulu.
I-Ultrasonic Ukwakhiwa kwama-Agrochemicals:
Ukuhlanganiswa kwezinhlayiyana ze-nano
Ukulondla & Ukunyakaza
Ukudluliswa kwesigaba se-catalysis (i-PTC)
Ikhwalithi nokusebenza kwama-agrochemicals amancane kakhulu kuncike ekugxilweni, ubukhulu kanye nokuma kwezinto ezisebenzayo kanye nezithasiselo kanye nokuxhumana kwabo. Lokhu kusho ukuthi ukusabalalisa, ukumiswa noma ukumiswa kwezithasiselo nezinto ezisebenzayo kuthonya ukubonakaliswa kwezici ezifunayo zomanyolo noma i-pesticide ngokuyinhloko. Ukuze ukhiqize amakhemikhali ekhwalithi ephakeme njengama-agrochemicals, ama-liquid noma ama-particle aqinile kufanele ahlelwe ngokucophelela: Ultrasonic Ukukhokha futhi I-homogenizing kubangela ukuhlakazeka okuzinzile futhi ekugcineni kube nomkhiqizo wamakhemikhali eliphezulu.
Uhla lukaHielscher lwabahlakazeli be-ultrasonic kanye ne-homogenizers linikeza okufanelekile “ihhashi lomsebenzi” for isicelo sakho!
Ngaphandle kwezithasiselo, ama-agrochemicals ngokuvamile agcwele izinto ezilodwa noma ngaphezulu ezisebenzayo ezinikezela ukwakha izindawo ezifunayo. Kuye ngohlobo lomkhiqizo, ama-agrochemicals akhiwa njenge-dispersions, emulsions, ukumiswa, ama-microemulsions, nezinhlelo ezihlukahlukene zokulawulwa kwezilawuli. Ukulawulwa kwamandla okuxhumana phakathi kwamaconsi noma izinhlayiya kubalulekile ukuthola ama-formulations ahlala isikhathi eside.
Njengoba i-ultrasonic idlulisa amandla amakhulu wekhanda lamandla, kuyithuluzi elinokwethenjelwa kakhulu ukusabalalisa powders, kuya emulsify amafutha nama-wax, kuya umshini izinhlayiyana kuze kube usayizi ohlosiwe (sub-micron noma nano), kuya qhafaza usawoti kanye nama-electrolyte, futhi ukuhlanganiswa umkhiqizo wokugcina ube ukwakheka okufanayo. Ngaphandle kokuxuba nokuxhuma, i-power-ultrasound yenza kube nokuphendula okuningi kwamakhemikhali njengokunye Ukusebenzisana, catalysis (isib I-PTC), i-polymerization kanye nokuhlanganiswa nokusebenza nano izinhlayiya.
Izinhlobo ze-agrochemical formulation zifaka:
Amandla Amandla Aphethwe (WP)
Ama-Granules Amanzi Angabonakali (WDG)
Izikhukhula Zomile (DF)
Ukukhuphuka noma ukumiswa Kugxila (SC)
I-Concentrates Emulsifiable (EC)
I-Concentrates Soluble Liquid (SLC)
I-Gluules Soluble (WSG)
Ukusetshenziswa kwamagagasi e-ultrasonic kuya ezinkambeni zamanzi kuyindlela eqinisekisiwe yenqubo yokuqinisa. I-Hielscher inikeza imishini yenqubo ye-ultrasonic kunoma yiliphi isilinganiso – kusuka I-lab homogenizer futhi pilot ultrasonicators kuya ku imishini yezimboni ze-ultrasonic for sonication enline of streams ezinkulu umthamo. I-ultrasonicators yamaHielscher yakhiwe unzima kakhulu izicelo ezindaweni ezidinga futhi zithembekile Ukusebenza komhlaka 24/7. Zonke izinqubo zingaba i-linearly up-scaled kusuka ku-R&D kuya ezingeni lokukhiqiza ezentengiselwano. Ukugcinwa okuphansi, ukusebenza okuphephile nokukhethwa kokubuyisela kukhona izinzuzo ezengeziwe.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Chemical Processing:
izimo zenqubo ezilawulwa kahle
kusuka ku-R&D ekukhiqizeni nama-Hielscher lab homogenizers, ama-bench-top devices futhi izinhlelo zezimboni
Ukukhiqiza amakhemikhali amahle kusuka ku-kg kuya kuma-multi-ton batches
Izitshalo eziluhlaza, zendawo-friendly
Izinhlelo ze-ATEX eziqinisekisiwe iyatholakala
I-Pimentel, uDavid (2002): i-Encyclopedia ye-Pest Management. I-CRC Press 2002.
I-Tadros, iTharwat (2013): Ama-Agrochemical Formulations. ku: Encyclopedia of Colloid and Interface Science. Springer 2013. 3-80.
Ukubunjwa kwe-agrochemical kunamalungu ahlukahlukene. Izithako ezibaluleke kakhulu zihlanganisa izinto ezisebenzayo (njenge-hydrocarbon chlorinated eg. DDT, i-2,4-D, i-2,4,5-T), i-organophosphates isib. I-parathion ne-malathion, i-carbamates eg i-carbaryl ne-carbofuran, i-triazine isib i-atrazine ne-simazine), ama-polymers, ama-nano ama-particle, ama-electrolyte (isb. ama-salts we-glyphosate, i-fomesafen, i-glufosinate, i-paraquat), ama-crystals amakhemikhali angenawo amakhemikhali, ama-intermediate (isib. 2,2-Dimethoxypropane), ama-gel systems, abathwali (isib. i-hydrocarbon fluids), i-anionic & ama-surfactant angewona ama-ionic, ama-adjuvants, ama-oli, ama-stabilizers kanye nama-emulsifiers. Lezi zakhi kumele zenziwe ngokuqinile ukuze zenze umkhiqizo osebenzayo wezolimo ovikela izitshalo nezitshalo ezivela ezinambuzane eziyingozi, ama-pathogens kanye ne-desease.
Hielscher Ultrasonics’ ama-homogenizers yizinto zokuxuba ezikhethwayo zokukhiqiza amakhemikhali aphakeme kakhulu. I cavitational ukukhishwa kwekhanda lama-ultrasonicator anamandla kaHielscher kunezindlela ezivamile zokuxuba. Industrial ultrasonics, njenge- I-UIP10000 noma UIP16000, phatha ukusakaza kwevolumu ephezulu kalula kumazinga ageleza aphezulu. Ukuze kusetshenziswe izinto ezibucayi, Ama-ultrasonicators a-ATEX ziyatholakala.